Shona Homepage / fact - free adult condom trust
Top Condom Tips
Keep your condoms in a cool, dark place. Heat can damage them
FACT – Free Adult Condom Trust (Bato Rinoona Nezvekupiwa Kwemakondomu Kuvanhu Vakuru Pasina Mubhadharo)
Hurongwa hwekugoverwa kwemakondomu kuvanhu vakuru pasina mubhadharo
Tose tinofanira kungwarira hutano hwedu. VeWest Berkshire PCT neveTVPS vakabatana kuti vape makondomu pasina mubhadharo kune vanhu vose vane makore anopfuura gumi nemasere (18) munharaunda yeWest Berkshire.
Vemabhizimisi kana magungano vanogona kunyoresa kune veFACT kuti vave vagoveri. Izvi zvinoreva kuti veTVPS vanokupai, pasina mubhadharo, makondomu, zvekuzora, makondomu echikadzi, zvekuvharisa nhengo dzemuviri kudzivirira kuti utachiona husatapukire mumukanwa zvamunogona kuchengeta pakavanzika kuti avo vanokushanyirai vatore …. PASINA MUBHADHARO zvachose!
Kana une makore anopfuura gumi nemasere (18) uye uchigara muWest Berkshire, zviwanire kuchengetedzeka pasina mubhadharo! Mazita enzvimbo dzaunogona kuwana makondomu pasina mubhadharo anogona kuwanika papeji yedu yeindaneti ‘yevagoveri’.
Kuchengetedza hutano hwako hwekusangana kwevarume nevakadzi hakuna kumboreruka kupfuura izvi, FACT!
Chinangwa chikuru chehurongwa uhwu ndechekukurudzira hutano hwakanaka hwezvekusangana kwevarume nevakadzi nekuwedzera kuwanikwa kwemakondomu kumapato evanhu akasarudzwa.
FACT ndeyeveruzhinji kunyange zvazvo ichinyanyotarisa mapato evanhu vari panjodzi huru zvichienderana nezvakasanangurwa zvinotevera:
Vagari veBME, vapoteri nevanotsvaga hupoteri
Varume vanosangana nevarume
Vanhu vari kurarama nehutachiona hweHIV
Vanhu vasina pekugara
Makondomu anowanika PASINA MUBHADHARO!